Boxe chinoise – WTKA – Pro 2017 : tompondaka eran-tany fanimbalony i Jean Christian | NewsMada
Boxe chinoise – WTKA – Pro 2017 : tompondaka eran-tany fanimbalony i Jean Christian
Par Taratra sur 31/10/2017
Nanakoako eran-tany indray ny anaran’i Madagasikara, ny alahady alina lasa teo. Voahosotra ho tompondaka eran-tany, amin’ny boxe chinoise, indray mantsy Randriamalaza Jean Christian.
Nihofahofa tao amin’ny kianja mitafon’ny Carrera, Italia, ny alahady lasa teo, ny sainam-pirenena maitso, fotsy, mena ary noredonina ho henon’izao tontolo izao ny hiram-pirenana Ry tanindrazanay malala ô, rehefa norombahin-dRandriamalaza Jean Christian, ny ho tompondaka eran-tany, amin’ny boxe chinoise Lei Tei, izay tafiditra amin’ny WTKA – Pro 2017.
Marihina fa fanimbalony amin’izao, ny nandrombahan’i Jean Christian, ity tompondaka eran-tany ity. Hatreto izany, mbola izy ny hany Malagasy nahavita nandrombaka be indrindra ity anaram-boninahitra eo amin’ny boxe chinoise, ity.
Tsiahivina fa “style” roa no tsy maintsy natrehiny, tamin’ity dia ny Kick Full, izay nandreseny teratany iranianina, teo amin’ny famaranana ary nandavoany Okrenianina, teo amin’ny Lei Tei, ho an’ny sokajy -75 kg avokoa. Tsy niatrika ny fifanintsanana i Jean Christian, noho izy efa tompon’ny anaram-boninahitra farany, ny taona 2016. Marihina fa efa indimy nahazo ny ho tompondakan’i Frantsa ihany koa ny tovolahy.
Nambarany fa nanamafy ny fanomanan-tenany, tamin’ny traikefa efa nananany izy, ka antony nahazoany, izao vokatra izao. “Mbola atolotro ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy, ity fandresena azoko ity”, hoy izy, taorian’ny fahavitan’ny adiny.
Tsiahivina fa nahatratra 5000 ireo mpikatroka, avy amin’ny firenena 107, no indray niady izay ho tompondaka eran-tany, tamin’ity taona 2017 ity.